अर्थ/व्यापार - नेपालको रेलसेवा सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेलसेवा सञ्चालनका लागि चाहिने रेल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको रेल विभागले जनाएको छ। सरकारी तहमा हुने खरिद सम्झौताका लागि भारतीय पक्षलाई नेपाल आउन आउँदो हप्ता पत्राचार गरिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। उनका अनुसार सम्झौता गरिएको बढीमा तीन महिनाभित्र रेल नेपाल आइपुग्नेछ। नेपालले खरिद गर्ने रेल भारतको चेन्नईस्थित सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। लागत कति हो ? भारतमा रेल निर्माणदेखि मर्मतसम्मका सबै काम सरकारी कम्पनीबाटै हुने गरेको महानिर्देशक मिश्रले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
रमेश लम्साल दोलखा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्दै आएका मन्त्री पुन आयोजना निरीक्षणका लागि शुक्रबार दोलखा पुगेका थिए । मन्त्री पुनले दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ, माथिल्लो पेनस्टक र तल्लो पेनस्टकको अवस्थाको बारेमा निर्माणस्थलमै पुगेर जानकारी लिएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महीना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
बाँके । भारतीय भन्सारले अनलाइन सेवामा समस्या देखिएको भन्दै रुपैडिहामा रोकेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० ट्याङ्कर नेपाल भित्रिएका छन् । अनलाइनमा समस्या आएपछि ट्याङ्करसँगै फलफूल र तरकारी बोकेका दर्जन बढी ट्रक पनि दुई दिनसम्म सीमामै रोकिएका थिए । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत शरदकुमार केसीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर भारतीय भन्सारमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भएपछि बिहीबार राति नेपाल भित्रिएको बताए । भारतले भन्सारमा अनलाइन प्रविधि लागू गरेपछि विभिन्न समयमा नाकामा समस्या हुँदै आएको उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७५/७६ को प्रथम सात महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ६.० प्रतिशत र ९४.० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५३.०८ अर्ब तथा कुल पैठारीमा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८३३.२७ अर्ब पुगेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
पर्वत । कास्कीलगायतका छिमेकी जिल्लामा बर्डफ्लू देखिएपछि धवलागिरिमा कुखुरा आयातमा रोक लगाइएको छ । केही दिनयता देशैभर कुखुरामा बर्डफ्लू देखिएपछि पर्वतसहित साविक धवलागिरिका बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा समेत कुखुरा आयातमा रोक लगाइएको हो । पोखरा–बागलुङ सडकको धवलागिरि प्रवेश गर्ने नाका डिमुवाबजारबाट कुखुरा र पंक्षीजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाइएको कुश्मा नगरपालिकाका पशु चिकित्सक रामजीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कास्की, चितवन, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा कुखुरामा बर्डफ्लू भेटिएपछि यस क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन आयातमा रोक लगाइएको पशु चिकित्सक पौडेलको भनाइ छ ।	थप पढ्नुहोस्
केपी ब्राण्डको मिनरल वाटर र बगाले बेकरीमा शिलबन्दी
प्रकाश डोटेल स्याङ्जा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र खाद्य प्रबिधि गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराको संयुक्त टोलीले वालिङ नगरपालिकाका क्षेत्रका उद्योगमा छड्के अनुगमन गरेको छ । छड्के टोलीले वालिङ् नगरपालिका ८ स्थित खनाल प्रशोधित पिउने पानी उद्योग र बगाले वेकरी उद्योगलाई शिलबन्दी गरेको छ भने सिद्धबाबा चाउमिन उद्योगलाई सचेत गराइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
होला त काठमाडौंका सडक १० करोडको कुचोले सफा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि शुक्रबारदेखि नयाँ ब्रुमर 'यान्त्रिक कुचो'ले सडक सफा गर्ने भएको छ । अघिल्लो सोमबार इटलीबाट काठमाडौं आइपुगेको सफा गर्ने उक्त यन्त्र पहिलो पटक रत्नपार्कमा प्रयोग गर्न लागिएको कामपाले जनाएको छ । अहिले ती ब्रुमर सञ्चालन गर्न चालक र सह-चालकलाई तालीम दिने कामसँगै पाटपुर्जा जडानका क्रममा भैइरहेको छ । उनका अनुसार बिहीबारसम्म सञ्चालनको तयारीको सबै काम सकी प्रयोगमा ल्याइने छ । नियमित रुममा कुन कुन सडकमा उक्त यन्त्रले सफा गर्ने भन्ने विषयमा कामपा प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यसँग छलफल भएको प्रवक्ता डङ्गोलले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका साँघुरा क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलपम्प हटाउन स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको छ । नेपल आयल निगम, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र महानगरको कार्यदलले अध्ययन शुरु गरेको छ । असुरक्षित स्थान वा मानवीय क्षति हुनसक्ने, भीडभाड तथा सवारी जाम गरिरहेका पम्पलाई हटाउन लागिएको हो । एक हप्तामा कार्यदले प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक एवं महानगरपालिकाका सहरी सुव्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले आफ्नो १२औँ जहाज ‘एटीआर ७२–५००’ भित्र्याएको छ । फ्रान्सको टुलुजस्थित एटीआर कम्पनीबाट खरीद गरिएको नाइन एन एएमवाई कलसाइन रहेको उक्त जहाज गएराति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । थपिएको जहाजसहित बुद्धका १० एटीआर जहाज भएका छन् । सात एटीआर ७२–५००, तीन एटीआर ४२–३२० र दुई बीचक्राफ्ट १९०० डी रहेको छ । नयाँ जहाजको रङ्गरोगन तथा प्राविधिक कार्यपश्चात अर्को महीनादेखि उडान भर्ने कम्पनीका बजार निर्देशक रुपेश जोशीले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
कारागारका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य ...
रोल्पाका ८४ बालबालिकालाई ...